Uke umenywe emcimbini e isitayela Chicago? Ayikho? Khona-ke uke walahlekelwa eziningi. Eminyakeni embalwa edlule gangster ephathini isitayela Chicago kwathathwa njengosongo into yokuqala futhi exotic. Futhi akumangalisi, ngoba lahlelwa kuphela ochwepheshe zangempela. Kodwa kuze kube manje, i-party in isitayela Chicago kwaba phezulu iqembu ethandwa kakhulu onyakeni. Njengoba sekuyiminyaka kuso, ngifuna ukuhlela okufanayo futhi iningi. Ngakho yini okumele uyenze ukuze wenze kusihlwa yakho Chicago kwaba isitayela kakhulu?
Party isitayela Chicago okukhethwa kukho ekahle nijabula ngasikhathi izenzakalo ezinkampani njalo. Zonke izivakashi zakho, abangane kanye nozakwabo ubumnandi isuke emhlabeni ngokhahlo ezigebengu futhi yekhasino yiziphazamiso ezihehayo. Ukuvakashela ngenkathi jazz edume Merlin Monro odinga ukukwazi nje izimiso ezimbalwa ezilula.
Okokuqala udinga ukukhumbula ukuthi esikhathini gangster esaqopha umlando ngokuthi isikhathi jazz nokungalungi. Ungase ucabange ukuthi lokhu sizojabulisa izivakashi abeza party, okuyinto Zizwe ngokugcwele ngokwakho ngesikhathi amasiko nemikhuba langaleso sikhathi.
Yilokho nje kungekho ukubayisigebengu sehlo ngeke akubekezelele, ngakho kudingeka alungiselele njengoba kahle ngangokunokwenzeka. Namaqiniso - isimo eyinhloko iqembu isitayela Chicago.
Iqiniso lokuthi ephathini ukuya nezingubo ezikhethekile kudingeka ukuxwayisa izivakashi kusengaphambili. Izimfanelo main lomkhosi yilezi: suit e isiqeshana ezacile, suspenders, isibhamu kanye isigqoko nsuku saziso, futhi ngibathole ngokushesha kuyoba yinkinga kakhulu. A umqondo omuhle ukuthumela izimemo zonke nge imiyalelo enemininingwane. Qiniseka ukuthi zichaza ukuthi kuyadingeka ukuba abe khona kuwo ukubukeka kwangaphandle.
Uma sikhuluma izingubo, khona-ke uyazi ukuthi lo mkhuba imfashini kakhulu kusihlwa - lena isitayela Retro. Abesifazane kuleli lucky kakhulu, ngoba lesi sitayela kubhekwa okhanga izizukulwane eziningi ezilandelanayo. Umfanekiso ubuhle leyo minyaka ungakwazi ngokushesha ubona omunye umuntu. Kungani kuphela kasilika igqoka, kwekhanda Retro ne amagagasi, eziningi amadayimane kanye noboya izimpawulo emahlombe. Shona kufanele ukuhlobisa isigqoko encane nge izimpaphe ambalwa noma besenze nesitayela esifanako ukugqoka ngepeni. sexy kakhulu iyobheka tights ukwenzela ukungena okuncane kakhulu ezinemilenze grid esikhulu nezicathulo izithende omkhulu. Ngiyavuma, kuba umane emangalisa!
Isudi enemishwe starched isikibha esimhlophe enhle umphelelisi besokunxele, uthayi enhle, isigqoko, yebo, nogwayi, okuyinto kuyoba mnandi ukuba uthole isetshenziswa. Party isitayela Chicago futhi kusikisela ukuba khona umoba kanye nesibhamu.
Njengoba lena party Retro, yingakho ayegqoka izingubo eziveza ungabheka elisophahleni lwendlu. Ngokuqinisekile ugogo nomkhulu wakho kukhona okuthile okufanele ukufanisa isithombe. Futhi, musa ukuyiziba izitolo ezifana lesibili ngesandla, kuhlanganise ubudala eziningi uqiniseka ukuba bekha ukuba izinto ezizuzisayo. Kwakubuye kube mnandi ukuvakashela emakethe itende nazo zonke izinhlobo izesekeli ubudala: izigqoko, abanikazi usikilidi, amacala usikilidi ephaketheni amawashi , uzothola lapho.
Party isitayela Chicago ngeke akwenze ngaphandle wezangaphakathi elihambisana. futhi kudingeka unakekele kusengaphambili ngalokhu. Kuyobukeka amaphosta ezinhle esibonisa New York, abaculi elalaziwa ngaleso sikhathi, ezigebengu nabantu abavamile, begqoke isitayela American kahle leyo minyaka. Ziyojabula abangani bakho futhi ifakwe kule elingenalutho izithombe gangster isitayela umuntu owafika izivakashi party kanye umbhalo kulo "wafuna" ngesiNgisi WONTED. Ingemuva ongakhonza zonke izinhlobo amabhayisikobho abonisa isihloko umuntu isitayela Chicago, njengokuthi "The Godfather," "Umtfumbu Fiction," "Vala, Stock futhi Barrel amabili Ukubhema" kanye nabanye abaningi. intando kaNkulunkulu enhle, uma kwenzeka kukhona lucky ngokwanele futhi athenge itafula roulette game, ithoyizi noma real akunandaba. Utshwala is best uthele teapots, ngoba "umthetho ezomile" engakaze kukhanselwe. Uma iqembu isitayela Chicago - umcimbi ongathí sina nokukhuluma phambi umculo kufanele kube ezifanele. Kulokhu, kwakungase kungabi jazz kangcono noma uma ingekho itholakala ke neze kuyofika eqenjini Russian "Bravo".
Imidlalo, ubhontshisi, siyakuhalalisela imincintiswano iqembu e isitayela Chicago, futhi, kufanele kube indlela ethile. Ukuze konke lokhu akubi farce iqembu nje kudingeka umeme zaziziningi merry, okufanele kube esihlokweni. Cabanga ukuthi ngemva kokufika kwabakhi izivakashi kwaba ihora, uke baziswa kakade zokulingisa komunye nomunye, eside isigqoko wenu ubelokhu elele ezinye ezimnyama, ithoyizi "izibhamu" ayekile amehlo. Bese basisize lomthofu, okuyinto ngesikhathi uzoqala mncintiswano entsha, noma ngeke akucele ukuba lokhozi izinsiza zakho: "Lady, kungani wathatha amagilavu yakho?" "Mnumzane, wena futhi washiya isibhamu akhe engaqashiwe! Leyo akuyona gangster! "
Futhi ekugcineni, ngingathanda ukukhumbuza mayelana imiklomelo. Qiniseka ukuba ucabangisise kahle ngezinselele le nkinga. Imiklomelo zingahluka kusuka besilisa ugwayi kanye ugwayi icala amabhodlela elincane yotshwala. Inhlanhla iphathi yakho!
Ponty echibini - indawo ephelele sokuzilibazisa nokudoba